Global Voices teny Malagasy » Bangladesh: Mampahonena ny Zavamisy Iainan’ireo Foko Vazimba Teratany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Avrily 2012 4:32 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Maya Sciortino, Noele Belluard-Blondel, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fitantanam-pitondrana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Teratany, Zon'olombelona
Ahitana foko teratany 45 (les Adivasis)  ao Bangladesh. Monina ao amin'ny tanàna kelin'ny Chittagong Hill Tracts  ny iraikambinifolo amin'izy ireo, raha toa kosa ka miely manerana ny firenena ny hafa. Betsaka amin'izy ireo no tsy salama ary iharan'ny fanavakavaham-bolokoditra, fanararaotana ary fampijaliana isan'andro ny sasany amin'izy ireo.
Tao anatin'ny fanadihadiana notontosain'ny Fondation Kapeng et Oxfam  (Fikambanana lehibe Kapeng sy Oxfam) [amin'ny teny bengali, tahaka ity rohy manaraka ity] mitondra ny lohateny hoe “Ny tatitra 2011 momba Zon'olombelona ao amin'ny [foko]Adivasis” , fantatra tamin'izany fa tamin'ny taon-dasa, niteraka fahamaizan-trano 111 an'ny olona teratany ny fifandonana teo amin'ny samy foko noho ny resaka adin-tany, olona 7 tao amin'ny foko no namoy ny ainy ary trano 12 hafa kosa no voaroba. Nandritra izany, vehivavy 11 tao amin'ny foko no voaolana ary novonoina kosa ny dimy tamin'izy ireo.
Mithushilak Murmu  nanazava ny antom-pisian'ny fanafihana:
Malobika Tudo  nilaza hoe:
Antoni Rema  niaina tahaka izany ihany koa :
Noho ny fikasana haka sy hibodo ny tanin'izy ireo no antony voalohany mahatonga ny fampijaliana, ao koa ny fikasana haka ny asa fiveloman'izy ireo. Namoaka lahatsoratra  ilay mpanao gazety Biplob Rahman rehefa avy nitsidika foko tao avaratry Bangladesh :
Nanoratra momba fijaliana iainan'ny mpiasa teratany miasa ao amin'ny zaridaina fambolena ravimboafotsy Sylhet izay notsidihany i Mithushilak Murmu :
Tsy nitsaha-nitombo ny fijalian'ireo olona niharan'ny fanavakavahana, sy nampahoriana ary nampijaliana taoriana ny fanamarihana  nataon'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny ao amin'ny firenena. Volana maro lasa izay, nilaza ny minisitra hoe : “Tsy misy olona teratany ato amin'ny firenena ” nandritra ny ady hevitra niarahana tamin'ny solotenan'ny fikambanana momba ny fampandrosoana sy ny diplaomaty.
Tao amin'ny bilaogin'i Mukto Mona, Odong Chakma  nampiseho ny fomba nanovàna ny afisy lehibe misy ny sarin'ny olona teratany tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Dhaka (Hajrat Shahjalal). Tamin'ny afisy teo aloha, izay nahitana soratra hoe “Miran'endrika ny Vehivavy teratany ao Chittagong Hill-Tract “, nosoloina fotsifotsy ny soratra sasany ka toy izao sisa no vakin'izany ankehitriny “.. Vehivavin'ny Chittagong Hill-Tract”.
Noho izany toe-javatra izany, nilaza i Ramdaschand Hasda :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/04/14/32043/
 foko teratany 45 (les Adivasis): http://fr.wikipedia.org/wiki/Aborigènes_de_l%27Inde
 tanàna kelin'ny Chittagong Hill Tracts: http://fr.wikipedia.org/wiki/Chittagong_Hill_Tracts
 Fondation Kapeng et Oxfam: http://www.prothom-alo.com/print/news/215209
 Nanoratra : http://w4study.com/?p=2924
 “Tsy misy olona teratany ato amin'ny firenena : https://fr.globalvoicesonline.org/2011/08/03/75326/